Lisitry ny fizarana systemd maimaim-poana | Avy amin'ny Linux
Isaac | | Fitsinjarana, Featured, GNU / Linux
SysV Init dia nosoloina systemd de facto amin'ny fizarana GNU / Linux amin'izao fotoana izao. Teo afovoan'io tetezamita io dia nisy distros hafa nifidy ireo rafitra novaina toa ny Upstart miorina amin'ny init daemon, izay nisy tao amin'ny Ubuntu, ChromeOS, openSUSE, Debian, Red Hat, Fedora, sns.
Ny systemd vaovao dia be pitsiny kokoa noho ny rafitra taloha, zavatra izay tsy nifanaraka tsara tamin'ny filozofia Unix amin'ny fampiharana programa tsotra. Ankoatr'izay, ny mitahiry ny fisoratana anarana amin'ny mimari-droa dia tsy tian'ny maro ihany koa. Na izany aza, tsy maintsy lazaina fa nanamora ny asa sasany ary manana ny tombony ihany koa. Na izany aza, mbola manelingelina mpampiasa maro iza no mbola tia ny rafitra klasika ...
Ho an'ny rehetra ireo izay te handositra ny systemd ary mifikitra amin'ny klasika, tokony ho fantatrao fa maro ny distro izay mbola afaka amin'ity rafitra hafa ity. Ary tsy ny Devuan ihany (karazana Debian tsy misy systemd no lasa nalaza be).
Eto aho dia mampiseho zavatra mahaliana anao lisitry ny fizarana tsy misy rafitra:
Devuan: Debian tsy misy systemd amin'ny ankapobeny, mandeha "miverina" amin'io heviny io mba hialana amin'ireo mpampiasa ity rafitra vaovao ity. Raha ny marina, ny anarany dia avy amin'ny fampifangaroana ny teny Debian + VUA (Admins veteran UNIX).
Alpine Linux: dia iray amin'ireo fizarana tsy misy systemd izay mety ho hitanao. Miorina amin'ny musl sy BusyBox izy io, mba ho maivana sy azo antoka kokoa.
artixlinux- Manatevin-daharana ireo fizarana isan-karazany misy miorina amin'ny Arch Linux. Fitsinjarana somary mailaka hihazakazaka haingana sy tsy misy systemd.
foana: iray amin'ireo fizarana tsy fahita firy. Tsy fork an'ny efa misy izy io, fa vita am-boalohany, miaraka amin'ny manager manager azy manokana ary mampiasa SysV init. Safidy matanjaka io, saingy mety tsy ny tsara indrindra raha mitady zavatra tsotra kokoa ianao ary tsy dia za-draharaha loatra. Na dia te hanandrana zavatra hafa ianao dia safidy tsara izany.
Slackware: kilasika ho an'ireo linuxer "taloha". Iray amin'ireo fizarana malaza indrindra sy sarotra indrindra, miaraka amin'ny Gentoo sy Arch. Fa toy ireo dia tena malefaka izy, mahery ary tena tsara ho an'ireo mpampiasa mandroso kokoa. Amin'ity tranga ity dia mampiasa rafitra scripting hafahafa izy, tsy ny SysV init, fa ny fomba BSD toy ireo ampiasain'ny sasany * BSDs.
Gentoo y funtoo: iray amin'ireo distro hafa kendrena amin'ireo mpampiasa za-draharaha indrindra noho ny fahasarotany, fa mahafinaritra ihany koa. Ity distro ity koa dia manalavitra ny fampiasana systemd OpenRC.
GUIX: iray hafa amin'ireo fizarana manala ny systemd, amin'ity tranga ity dia ampiasaina ho rafitra init ny GNU Daemon Sherped. Tsy distro mora ampiasaina izy io, ary mampiasa rafitra fitantanana fonosana transactional.
antiX Linux: iray hafa amin'ny fizarana systemd maimaim-poana, ary miorina amin'ny Debian.
CRUX: distro iray hafa miorina amin'ny script-style BSD ary tena maivana.
PCLinuxOS: Raha tianao ny Mandrake distro, dia tokony hosedrainao io fork io izay mbola mitazona ny SysV init.
Adelie Linux: tetikasa tanora somary tanora mikendry ny hanaja andry telo iankinan'ny aina: mifanentana tanteraka amin'ny POSIX, mifanentana amin'ny maritrano maro, ary malefaka.
obarun: iray hafa mifototra amin'ny Arch, miaraka amin'izay rehetra dikan'izany, ary koa mifantoka amin'ny mangarahara sy ny fahatsorana. Amin'ity tranga ity dia mampiasa rafitra hafahafa antsoina hoe 6 izy fa tsy systemd.
Kiss Linux: ny anarany efa manome hevitra hoe inona izany, izany hoe manaraka ny fotokevitra Kiss. Tetikasa mahaleo tena izy, noforonina avy amin'ny loharano, miaraka amin'ny BusyBox sy ny rafitra fanombohany.
LIGURES- Tsy azo raisina ho iray amin'ireo distro iraisana koa io, fa afaka amin'ny systemd. Miorina amin'ny Gentoo izy ary mampiasa safidy roa hisolo ny systemd: openRC na s6.
Raha tsy dia mahay loatra amin'ny tontolon'ny Linux ianao na tsy mila fahasarotana, dia mamporisika anao manokana aho aleonao mijanona miaraka amin'i Devuan… Raha mpampiasa mandroso ianao na te hanandrana fomba hafa hafa dia afaka misafidy ny hafa ianao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny Linux » Fitsinjarana » Lisitry ny fizarana systemd maimaim-poana
Heveriko fa tokony ampiana amin'ny MXLinux koa izy io satria raha tsy izany dia tsy mandeha amin'ny systemd izy io, na dia apetraka aza raha sanatria misy olona mila manomboka miaraka aminy, saingy tsy maintsy atao avy amin'ireo safidy mandroso an'ny Grub ary manova azy amin'ny tanana ny mpampiasa.
Izaho dia mampiasa Artix miaraka amin'ny OpenRC, manana boot telo miaraka amin'i Arch aho (mbola tsy nesoriko io ary manampy ahy hampitaha) sy Windows 10 ho an'ny lalao.
Mampiasa OpenRC aho satria toa matotra kokoa, mora ampiasaina ary toa manana ho avy bebe kokoa aho satria manondro fa hampiasa azy io koa ny BSD sasany.
Ny zavatra mahafinaritra amin'ny fananana Artix sy Arch amin'ny solosaina finday iray dia ny azonao ampitahaina ny fampisehoana, ny fotoana anombohana sns. Ny azoko lazaina dia ny Artix manome doka lehibe an'i Arch amin'ny zava-drehetra afa-tsy ny fanidiana ny solosaina izay haingana kokoa ao amin'ny Arch. Amin'ny ankapobeny dia mandeha tsara kokoa ny zava-drehetra, na ny Plasma aza dia manomboka haingana kokoa avy eo amin'ny efijery fidirana mandra-pipoaky ny mailaka. latabatra. Manana izany koa aho amin'ny roa tonta fa raha tsikaritro fa isaky ny fanavaozana ny systemd Arch dia miharatsy izany, indrindra ny fotoana fanombohana izay nanomboka hatramin'ny herintaona ka hatramin'ity ampahany ity. Marina fa mitaona ny Intel patch (Meltdown, Spectre, sns) fa mety hisy fiantraikany amin'ny Artix ihany koa izy ireo ary ny fahasamihafana misy eo amin'ny iray sy ny iray hafa dia goavana tokoa.
G3O4 dia hoy izy:
Famerenana sy fisaorana tena tsara ho an'ity fampitahana ity.
… Ankoatr'izay, ampio "Knoppix" amin'ny lisitry ny fizarana tsy misy Systemd. Tena distro tanteraka raha misy.
Valiny amin'ny G3O4
@ unodetantos misaotra ...
inona ny mahasamihafa ny iray sy ny iray ary iza no tsara indrindra ary amin'ny lafiny inona no tsara kokoa.
Mitovy tanteraka amin'ny zavatra rehetra izy ireo afa-tsy ny init. Manana ny fonosana mitovy aminy izy ireo, raha ny marina dia ny Arch repos (ankoatry ny fototra) dia ao amin'ny Artix fa raha ny fahitako azy dia backup ho an'ny repo izy ireo. Fantatro fa mikasa mandritra ny fotoana antonony izy ireo (raha avelan'ny fotoana sy ny enti-miasa) hanana fifehezana feno ny repo ary tsy hanana ireo Arch ireo ao anaty fikirakirana. Heveriko fa raha sendra miala amin'ny fiankinan-doha amin'ny systemd izy ireo (hevitra manokana izany) satria nofoanan'izy ireo tanteraka ny sisa amin'ny systemd dia tsy hahita shim na libsystemd-dummy ianao na zavatra hafa mitovy amin'izany.
Raha ny fiarovana, satria mitovy amin'ny Arch, arakaraka ny fomba fitehirizanao azy dia hanana izany ianao, na dia tsy manana systemd aza, dia azo antoka fa ireo mpikirakira ny inits samy hafa dia mihevitra ny olana ara-piarovana ho zava-dehibe kokoa noho ny olon'ny systemd ka noho izany dia raisiko mipetraha fa ity irery no azo antoka.
Etsy ankilany, afaka mametraka fonosana AUR tsy misy olana ihany koa ianao, nametraka olana vitsivitsy sy aotra aho.
Tsara ny manamarika fa ny rafitra init dia S6, fa tsy 6S. Amin'ny tranga Artix dia manome kinova 3 misy inits samy hafa izy: openrc, S6 ary runit.